स्व. रवीन्द्र अधिकारीको ट्वीटर अब विद्याले चलाउने - Vishwa News
काठमाडौं । स्व. नेता रवीन्द्र अधिकारीको ट्वीटर ह्याण्डिल अब पत्नि विद्या भट्टराईले आफ्नो नाममा चलाउने भएकी छिन् । उनले शुक्रबाट यसको औपचारिक जानकारी ट्वीट गर्दै गराएकी छिन् ।
पाथिभरा देविको दर्शन सकेर काठमाडौं फर्कने बेला हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेपछि पर्यटन मन्त्री रहेका अधिकारीको १५ फागुन २०७५ मा निधन भएको थियो ।
उनकी पत्नी अहिले अधिकारीले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् । रवीन्द्रको निधनपछि यो अकाउन्ट निष्कृय थियो ।
शुक्रबार विद्याले यस अकाउन्टलाई अपटेड गरेकी छिने । यस अकाउन्टमा ८० हजार जनाले फलो गरेका छन् । नाम परिवर्तन गरी विद्या भट्टराई राखिएको छ । अब विद्याले आफ्नो चुनावी अभियानका गतिविधि समेत यसै ह्याण्डिलमा राख्न थालेकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘प्रिय रवीन्द्र जीले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक रुपमा यहाँहरुसँग सामिप्यमा रहन प्रयोगमा ल्याउनु भएको यो ट्वीटर ह्यान्डललाई आजदेखि मैले प्रयोगमा ल्याएकी छु। हामीले रवीन्द्रजीलाई गुमाउँदै गर्दा उहाँले देखेका सपना र योजनालाई अगाडि बढाउँन यहाँहरुका सुझाब सल्लाह महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।’
रवीन्द्र सामाजिक संजालमा एक लोकप्रिय नेता थिए । उनी हरेक सार्वजनिक महत्वका विषयमा खुला बहसमा रहने गरेका थिए । त्यसकारण पनि उनी लोलप्रिय बनेका थिए ।
अमेरिकाले भन्यो नेपाल आतंकबादी संगठनको गतिबिधिका लागि ठुलो अखडा